डिभोर्स गरिसकेकी पत्नीसंग सम्बन्ध बनाउन यी श्रीमानले जे गरे त्यो कसैले सोच्नै सक्दैनन ! – List Khabar
Home / समाचार / डिभोर्स गरिसकेकी पत्नीसंग सम्बन्ध बनाउन यी श्रीमानले जे गरे त्यो कसैले सोच्नै सक्दैनन !
admin October 31, 2021 समाचार Leaveacomment 134 Views
डिभोर्स गरिसकेकी पत्नीलाई क’र’णी ग’रे’को आरोपमा सुनसरीको धरानबाट एकजना व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। डिभोर्स गरिसकेकी पत्नीलाई क’र’णी ग’रे’को आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले वडा नं. १५ निवासी भोजराज थापा ‘फडिन्द्र’लाई पक्राउ गरेको हो।
इप्रका धरानका डीएसपी नरेन्द्र कुँवरका अनुसार पूर्वपत्नीलाई क’ र’ णी ग’रे’को उजुरीको आधारमा उनी पक्राउ परेका हुन्। उक्त घटना यही बिहीबार भएको बताइएको छ। पीडितका छोराछोरी दुवैले घटनाबारे पनि बयान दिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको डिएसपी कुँवरले बताएका छन्।
‘उनीहरुबीच डिभोर्स भइसकेको हो । तर क’र’णी ग’रे’को उजुरी परेको छ’, उनले भने, ‘छोराछोरीले समेत घटना भएको बताएकाले पक्राउ गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ।’ छोराछोरी अर्को कोठामा सुतिरहेको बेला पूर्व पत्नीलाई उनले ज,वरज,स्ती गरेका थिए। उक्त कुरा देखेपछि छोराछोरीलेसमेत प्रहरीलाई बताएका थिए। प्रहरीले पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकेको जानकारी दिएको छ।
Previous दिनेश रातारात भए करोडपति, महिना दिनको मिहिनेतले बनायो मालामाल !